Ku -dallacsiinta degdegga ah ee taxanaha Apple Watch 7 oo ay ku jiraan xeedho la jaan qaada borotokoolka Bixinta Awoodda USB ama Apple iska leh | Wararka IPhone
Mid ka mid ah waxyaabaha cusub ee sidoo kale lagu daray taxanaha Apple Watch 7 in ay bilaabeen iibinta maanta ayaa si dhaqso leh u dallacaysa. Lacagtan waxay u baahan tahay in la fuliyo xoogaa ugu yar oo inta badan dhibaatadu waxay ku jirtay fiilo lacag -bixin ah oo hore u adeegsan jirtay USB A, oo hadda ah USB C, iyo xeedho lafteeda.
Taasi waa sababta ay shirkaddu u sharraxayso shuruudaha lagama maarmaanka u ah inay ku fuliso rarkan xawaare sare. Dareenkan, adeegsadayaasha haysta fiilooyinka Apple ee rasmiga ah ee leh isku xirka USB C waxay ku sameyn karaan nooc kasta. Kuwa aan haysan fiilooyinkaan rasmiga ah ee Apple waxay ku xirnaan doonaan borotokoolka Bixinta Awoodda USB laga bilaabo moodooyinka 5W.
Kuwa ka socda Apple waa inay lahaadaan ugu yaraan awood 18W si ay awood ugu yeeshaan inay ku soo dallacaan lacagtan degdegga ah saacadaha cusub, kuwa aan rasmiga ahayn ee Apple waa inay lahaadaan borotokoolka Bixinta Awoodda USB (USB-PD) si ay u awoodaan inay ku soo oogaan lacagtan bixinaysa 80% batteriga guud 45 daqiiqo gudahood. Waxa muhiimka ah ee halkan ka jira ayaa ah in aan isticmaalno fiilada u gaarka ah ee lagu daray kiiska saacadda iyo mid ka mid ah fiilooyinkaas.
Mar kale waa inaan nidhaahnaa taas fiilooyinkaan kuma jiraan sanduuqa ee saacadda cusub laakiin waa suurtogal in laga iibsado dukaamada Apple. Waxaan u aragnaa maneuver -kaan runtii nasiib darro in kastoo aan ku faraxsanahay xaqiiqda ah inay ugu dambeyntii ku daraan USB C isku xirka fiilada. Apple ayaa sidoo kale sharraxaysa in ku dallacidda degdegga ah ee taxanaha Apple Watch 7 aan laga heli karin Argentina, India ama Vietnam, laakiin ma bixinayo sharraxaad ku saabsan xaddidnaanta saddexdaas waddan.
Dhinaca kale, talada halkan ku jirta ayaa ah in la isticmaalo xeedho “diyaarsan” oo lagu dallaco qalabkayaga. Xusuusnow in ay suuqa ku jiraan xeedho tayo leh qiimayaal macquul ah, maahan inaad ka iibsato Apple haddii aadan rabin, laakiin Fadlan isticmaal xeedho iyo fiilo lacag -bixin leh oo leh shahaadooyin ammaan si looga fogaado dhibaatooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Ku -dallacsiinta degdegga ah ee taxanaha Apple Watch 7 oo leh xeedho la jaan qaada borotokoolka Bixinta Awoodda USB ama Apple iska leh